Ikhishi ompompi Isibambo Esisodwa Ngokudonsela phansi Isifutho
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela Phansi Oompompi Bekhishi / WOWOW Ikhishi ompompi Isibambo Esisodwa Nge-Pull Down Sprayer
I-WOWOW Kitchen Faucets Isiphatho Esisodwa Ne-Donsa Ngezansi Isitshizi
Ngekhanda lokugeza elisuswayo, kampompi wokuxuba amanzi wasekhishini kulula ukukulawula. Ngenxa yenqola yayo yokubumba, lo mkhiqizo uqinisekisa ukusetshenziswa kwesikhathi eside ngaphandle kokudonsa amanzi nokuvuza futhi ulawule nokushisa okuqondile kwamanzi.
2311601C imiyalo yokufaka
Isikhiphi se-ekhishini se-Chrome sidonsa phansi i-2311601C
Ingabe ufuna ipayipi lokugoba ikhishi eliphezulu le-chrome eliphansi elenza kahle kuwo womabili amakhaya nemigoqo nezindawo zokudlela zasekhishini? Ungabe usasesha! I-WOWOW ikwazile ukuqamba i-chrome kitchen sink ipompo edonsela phansi enikeza ukusebenza kweligi ephezulu, noma ngabe kunesimo esinzima nesifuna ngenkani. Njengoba ungabona, ezindaweni zokuhweba ezinjengezindawo zokudlela nemigoqo, wonke umsebenzi oyedwa usebenza ngejubane eliphezulu. Lokho akusho ukuthi imishini yasekhishini noma yebha iphathwa ngobumnandi ngabasebenzi. Kungakho ompompi bamanzi basekhishini bezentengiselwano kufanele bamelane ngo-100% ukunikela ngokusebenza okungu-100% ngaso sonke isikhathi, nangaphezulu ngezikhathi ezinzima kakhulu.
Abanini bamabha nezindawo zokudlela bavame ukukhetha ukudonsa imishini yokucwila ekhishini, ngoba iyasebenza futhi iyasebenza. Bangakwazi ukufinyelela kunoma iyiphi indawo ngaphakathi noma eseduze kwekhishi. Ngisho nasezitolo zokudlela ezinekhishi elikhulu lazo liyacwila, ukudonsa isitshulu sekhishini lokudonsa phansi kungafinyelela kunoma iyiphi indawo noma indawo okufanele ihlanzwe. Isici esifunwa kakhulu izikebhe ezishisayo zekhishi lokuthengisa, ukuthi ikhanda lesifutha libuyela esimweni salo sokuqala. Futhi mhlawumbe ngokuzenzakalelayo ngesiteshi sikamazibuko sedokodo ukuze ungalahli noma yisiphi isikhathi esibalulekile. Akusizi ngalutho i-chowet ekhishini ye-chows ekhishini ye-Chowow isetshenziswe kabanzi kuzo zombili izindawo zokudlela nasemakhishini asekhaya emhlabeni wonke.
Izindinganiso ezisezingeni eliphakeme zekhishini lokucwilisa ekhishini ziya phansi
Isikebhe sokudonsa ekhishini se-chrome sikhishwa phansi kwe-WOWOW siqinisekisiwe ngaphansi kwe-BSCI, CE, UPC, ne-ISO 9001. Lokhu kufakazela ukuthi i-tha WOWOW ithatha ikhwalithi ngokungathi sína futhi yenza konke ukufeza futhi idlule amazinga embonini. Ukufinyelela okulindelekile kuyinhloso. I-WOWOW isebenzisa kuphela izinto ezisezingeni eliphakeme njenge-high-density zethusi nensimbi engagqwali. Ukuqina nokumelana ngakho kuyaqinisekiswa. Umzimba wesikebhe wokuphehla ukhiqizwa ekhishini wakhiwa nge-zinc alloy, umongo wepayipi wenziwa ngethusi elikhulu kanti isiponji sakhiwe ngensimbi engenasici. Lezi zisetshenziswa ziqinisekisa isikulufu esikhudlwana se-ekhishini se-highperformance esihlala isikhathi eside, esingashayeki, esingaholi futhi esingahambisani nokuqhuma.
Isikhiphi se-chichi ekhishini se-christow seWowow sidiliza sici esiteshini sikazibuthe esizohlala sihlangana futhi sidlule okulindelwe. Ikhanda lokufafaza lihlala lisesimweni esifanele, ngisho nangemva kwesikhathi eside. Lesi siteshi esisebenza ngogesi sihlolwe kaningi izikhathi eziyi-10,000. Kwavela ukuthi ngemuva kwazo zonke lezi zivivinyo, uzibuthe owakhelwe ngaphakathi usengakwazi ukubeka ikhanda le-spray ngemuva kokulikhipha.
Khipha phansi isikebhe sekishi ekhishini lokushisela phansi
Akukona nje kuphela ukuthi isikebhe se-chrome ekhishini le-WOWOW sidiliza imali engabizi kakhulu ukuyithenga, kuyabiza kakhulu maqondana nokusetshenziswa kwamanzi. Ngenxa ye-Neoperl Aerator yayo entsha, ukusetshenziswa kwamanzi kuncishisiwe kwaba yi-50% yokusetshenziswa kwayo kwasekuqaleni. Le Neerl Aerator iqinisekisiwe futhi, futhi izosebenzisa injongo yayo isikhathi eside. Yehlisa ukuhamba kwamanzi ngendlela ehlakaniphile, ngakho-ke ngeke uqaphele ukuthi kusetshenziswa amanzi amancane. Amanzi amane anikezwe ngomfutho ophakeme ukuze ahlanze kangcono, kunokuba ngaphandle kwensiza yokunciphisa amanzi ye-Neoperl Aerator. Futhi ngendlela eya empeshenini wamanzi angama-50%! Lokhu kufakazela ukuthi i-WOWOW ithatha ubuchwepheshe kanye nokusetshenziswa kwamanzi ngokungathí sina. Uma kukhethwa, i-aoperator ye-Neoperl ABS imane isuswe ngohlamvu lwemali. Kungathatha indawo futhi uyihlanze, noma usebenzise ingcindezi ephelele yamanzi ye-chowet ekhishini ye-chOW ekhishini ye-chowens.
Noma kunjalo, intengo yokuthenga yekhiphedi ekhishini ye-chrome ekhishini ishibhile ibiza kakhulu. I-WOWOW ikunikeza inani elifanele ngemali uma ubheka ikhwalithi inkampani enikela ngayo. Inqubo yayo yokukhiqiza isebenza kakhulu futhi inembile. Ngale ndlela i-WOWOW ilondoloze izindleko eziningi, futhi nokho inikeze ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme engancintisana noma i-A-brand ekhishini ekhanyayo ye-fan ekhishini. Isikhiphi se-chichi ekhishini ye-chowow ekhishini seyiyathengiswa ngisho nangabizi ekhishini lesabelomali. Ngekhwalithi yayo engabizi kakhulu nokubukeka kwesimanje, i-WOWOW ngokuqinisekile ifakazela ukuthi iyisinqumo esihle kunazo zonke emakethe.
Khipha phansi isikebhe ekhishini ekhishini le-chrome
Ngenkathi ithiphu yokucwilisa ekhishini yeWOWOW ibonakala ilingana nekhishi lesabelomali futhi, akusho ukuthi i-WOWOW iye yahlehla kwisitayela, ekwakhiweni nasekusebenzeni kwalo. Ngokuphambene nalokho! Le faucet ekhishini yokudonsa ekhishini ye-chrome yenzelwe phansi ngokunakekelwa futhi ingeza ukubukeka okuhle ekhishini lakho. Idizayini enobukhulu obukhulu ibukeka njenge-swan ebukekayo kanti isibambo sakhiwa ngesibindi ngamajika abushelelezi. Inhloko yokufafaza inomthelela ekwakhiweni kwayo kwanamuhla.
Mayelana nokusebenza, ikhishi lokudonsa isikebhe ekhishini lokwenza phansi linikeza izindlela ezi-3 zamanzi: shanela, usakaze kanye nesifutho. Ngemodi yokufafaza eyingqayizivele, amanzi aphoqelelwa ngokuqinile njenge-aqua-blade ukuhlanza izitsha ezingcolile nekhishi licwila ngokushesha nangamandla. Imodi yokugeleza enamandla ilungele kakhulu ingcindezi yamanzi aphansi, isibonelo uma ugeza imifino futhi ungafuni ukuyilimaza. Ekugcineni, ngemodi yokufafaza ungagcwalisa imbiza ngamanzi ngesikhathi esifushane.
Ubuhle bokusebenza kwesikhiphi se-chichi ekhishini lokudonsa phansi
Ukwamukela isisipha esenziwe ngesandla esisodwa futhi udonsa phansi, isifutho se-chrome ekhishini se-Chowow ekhishini sekulula impela kulula ukusebenza. Ngaphandle kwalokho, ikhanda lesifutho sokujikeleza se-360 degree likusiza nokuthi wenze umsebenzi wakho kalula, likusindisa isikhathi nomzamo. Ihose yokukhipha inikeza inqubo ebushelelezi yokubuyela emuva. Le hole umgodi owodwa we-chrome ekhishini isikebhe idonsa ngakho-ke ivelele ngenxa yokusebenza kwayo okulula.
Ekugcineni, ikhishi lokudonsa isikebhe ekhishini lihosha kulula ukufaka. Le faucet yesinki ekhanyayo eyakhiwe ngesandla esisodwa yayenzelwe ukulingana nezitebhisi zasekhishini ezi-1 noma ezi-3. Akudingeki ukhathazeke ngezinkinga ze-synthetic ngenxa yezimbobo ezibekwe ngaphambili, ngoba i-WOWOW inikeza yakho ngephedi yendawo yokumboza yensimbi ukumboza noma yimuphi umgodi. I-WOWOW futhi inikezela zonke izinto zokufaka ezidinga ukufaka lesi isikebhe sokudonsa ekhishini le-chrome, kufaka phakathi amagilavu, itepi le-Teflon namathuluzi. Ukufakwa kwaleli faucet ekhishini le-WOWOW ngakho-ke kufana nomoya opholile!
Izinzuzo zekhishi lokushanela le-chrome ekhishini zidonsa phansi ngamafuphi:
 Idizayini ebunjiwe kahle
 Ikhanda lesiphuzo se-Magnetic
 Imisebenzi emithathu yokufafaza
I-SKU: 2311601C Categories: Ikhishi Faucets, Donsela Phansi Oompompi Bekhishi Tags: Isandla esisodwa, ompompi wokuxuba be-sink, Insimbi engagqwali